Tranofiara vaovao ho an'ny The Tragedy of Macbeth amin'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Tranofiara vaovao momba ny Loza nataon'i Macbeth tao amin'ny Apple TV +
Apple dia manohy manohana ny andiany sy ny atiny tany am-boalohany ao amin'ny Apple TV + indrindra amin'izao ankatoky ny Krismasy izao. Ireo daty ireo dia fotoana tsara hisarihana mpanjifa vaovao miaraka amin'ny votoaty kalitao vaovao. Ho an'ity, ny orinasa amerikana dia vao namoaka izay tranofiara vaovao ho an'ny andiany Ny loza nahazo an'i Macbeth Amin’ny volana janoary no hivoaka izany, araka ny vinavina.
Clip vaovaon'ny The Tragedy of Macbeth dia navoakan'ny Apple tamin'ny alàlan'ny fantsona YouTube-ny. Ny filaharan'izany dia mampiseho ny famonoana ny Mpanjaka Duncan. Notarihin'ny mpandresy Oscar Joel Coen ary nilalao tamin'ny mpandresy Oscar Denzel Washington sy Frances McDormand, ny fampifanarahana an'i Shakespeare dia nalaina tamin'ny sary mainty sy fotsy. Ho hita ao amin'ny Apple TV + izany manomboka ny 14 Janoary. Hivoaka amin’ny teatra aloha anefa izy io, amin’ny Krismasy.
Ity dia sarimihetsika voalohany nosoratan'i Joel Coen sy notarihin'ny tsy nisy ny rahalahiny ary mpiara-mamorona sarimihetsika, Ethan Coen. Heverina ho tetikasa goavana izy ary antenaina ho mpifaninana azo antoka amin'ny vanim-potoanan'ny loka. Tsy mahagaga raha ny tsara indrindra no andrasana amin'ity famokarana ity, satria ny cast dia feno sarivongana volamena ary i Coen mihitsy no tsy manana trano ary tsy latsaky ny efatra ao amin'ny fananany.
McDormand dia milalao an'i Lady Macbeth, ary Washington dia Lord Macbeth, ao amin'ny tantara noforonina momba ny lalaon'i William Shakespeare. Ny fakana sary mainty sy fotsy, i Coen dia nisafidy ny hisoroka ny toerana misy azy, naleony ilay antsoiny hoe "tsy zava-misy" amin'ny fanamafisam-peo.
Mbola mila miandry kely isika vao hahita ny voalohany amin'ny Apple TV +, fa ao anatin'ny iray volana latsaka dia ho ao amin'ny sinema.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Tranofiara vaovao momba ny Loza nataon'i Macbeth tao amin'ny Apple TV +
Nanatona an'i Steve Woz ... mba hanao sonia ny motherboard Apple I!
Kojakoja ho an'ny iPhone sy gadget misy HomeKit amidy amin'ny Black Friday